Tag: Ibu Ibu page | Martech Zone
Tag: Ibu Ibu page
Anyị edeela obere ihe gbasara ihe ndị na - emetụta ikike weebụsaịtị gị ịbu ngwa ngwa ma kesaa otu nwayọ ọsọ na-emerụ azụmahịa gị. Ọnụ ọgụgụ ndị ahịa anyị na-ajụ na-eju m anya n'eziokwu nke na-etinye oge na ume dị ukwuu na azụmaahịa ọdịnaya na atụmatụ nkwalite - niile ka ị na-ebunye ha na ndị ọbịa na-enweghị atụ yana saịtị na-ebughi oke ibu ngwa ngwa. Anyị na-anọgide na-enyocha ọsọ nke saịtị anyị na
Nkwekorita mmadu agaghi enweta gi nke oma
Thursday, May 1, 2008 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Otu n'ime arụmụka nwere mmasị na m nwere n'otu ọrụ m bụ ịkwụsị ịgbaso ihe onye ọ bụla kwuru na ha chọrọ ma bido ọhụụ. Nke bụ eziokwu bụ na a ga - eme nnukwu ihe na - esote n’enweghị onye na - arịọ maka ya. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ bụ ime ka mmadụ niile nwee obi ụtọ, ị ga-eji ihe ọ bụla ị chọrọ iji nweta ọrịre ọzọ, soro asọmpi ahụ, tinye atụmatụ ndị ị rịọrọ, ma ọ bụ mee
Thursday, May 1, 2008 Sunday, September 30, 2012